Maxaad kala socota Cudurka Infekshanka Kaadida Waxbadan ka ogoow ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Maxaad kala socota Cudurka Infekshanka Kaadida Waxbadan ka ogoow
10:35:00 PM Qormooyin No comments
Cudurkan waxaa sababa infekshanka kaadi-mareenka ku dhaca waxaana lagu daaweeyaa jeermis-dile ama antibiyootik. Haweenka qaarkood waa ku soo noq-noqdaa ragase kuma badna.
Sida caadiga ah kaadida waa ka nadiif jeermis, markuu soo galana wuxuu sababaa kaadida oo qofka gubta iyo kaadi badan oo hadba suuliga lagula cararo. Waxaa kaloo dhici karta xumad, gumaar-xanuun iyo inay kaadidu si xun u soo urto ama midabkii lagu yaqiin ay iska badasho.
Ma laga biskoodaa
Sida caadiga ah infekshanka kaadi-haystu ma aha cudur khatar ah hase yeeshee waxaa dhici karta inuu kor iyo kalyaha u safro isla markaana sababo infekshan halis ah taasoo kalyaha ku samayn karta dhaawac. Taas waxaa lagu gartaa xumad sare iyo gariir, kalyo & dhabar xanuun, madax xanuun, labo-labo iyo matag. Haddii aad calaamadahaas isku aragtid waxaa lama huraan ah inaad raadsatid gargaar caafimaad oo deg-deg ah.
Soo noq-noqodka infekshanka
Waxaa dhacda inuu infekshanku soo noq-noqdo. Marka ugu horeeya ee haweenka lagu arko waxaa laga yaabaa in la baaro. Baaritaanadaas badanaa ma sheegaan wax cilad ah oo loo aanayn karo infekshankaas. Dumarka qaar wuxuu infekshanka ku dhacaa markay galmo sameeyaan qaarna markay walwasan yihiin.
Daawada la yiraahdo Trimethoprim ayaa badanaa loo isticmaalaa daawaynta infekshanka kaadi-mareenka.
Waxaa la ogaaday in matantaha (kastuumooyinka) ka samaysan dun cudbi ah uu yareyn karo soo noq-noqodka infekshanka isla markaana kan laga sameeyo dunta nayloonka uu sahli karo. Biyo badan oo la cabo wuxuu nadiifiyaa kaadi-haysta wuxuuna yareyn karaa infekshanka. In galmada kadib la kaadiyo wuxuu caawin karaa haweenka uu aalaaba infekshanku ku dhaco galmada kadib.
Xuquuqda Qoraalka Waxa leh Webka Caafimaadka ee Www.somdoc.com
Ogeysiis Muhiim ah:shabkada Waxa ay bila'beysaa Ca...
Barashada Baaburka:Sida loo Hago Haadadka Gaariga...
Barashada Baaburka:sida Lugaha loogu Maamulo Gaari...
Barashada Wadista Baaburka:Sida loo dhaqaajiyo Baa...
Maxaad kala socota dhibatooyinka Uu leeyahay Sigaa...
Waxbadan ka ogoow Bidaarta (Macluumad Faa'iido leh...
Waa maxay Virus wax badan ka ogoow iyo sida looga ...
Daawo Muxaadaro :Baro Sidaad U Tukan Laheed Salada...
Lix Shey oo aad u baahan tahay si aad u qorto Buu...
Waa maxay google Adsene sideese lacag aad uga same...
Daawo Waa maxay shiicada ?sheikh maxamed Cabi Uma...
Hel Serial Number-ka Interned download Manger(IDM)...
Waa maxay Green Screen iyo Blue Screen Maxey Qabta...
Download :Soo dagso Barnaamijka Cisco IT Essential...
Ka faa'iideyso Websit Aad ka heli karto dhamaan Bu...
Waxkabaro sida lo sameyo barnamij la tabinayo ama ...
Baro Sida ay usameyaan wariyasha wararka TV yada a...
Daawo Muxaadaro ku saabsan Dahaaradda (Ka Faa'iide...
Aqristoow ma ogtahay in uu jiro Web aad ka heli ka...
Luqda Ingariis-ka Sameyn ma ku leedahay Luqadaha k...
Si aad U noqoto Qof Programmer ah raac 5-Wado
Waa maxay farqiga u dhaxeeyo Sql iyo rdbms relatio...
Baro sida Youtube looga so Dajiyo video Program am...
Ogeysiis Muhiim ah:La soco Cashiro Cusub oo shabka...
Daawo Ciyaarta Da'yarta Somalia Vs Sa'uudi Arabia ...
Waxbadan ka ogoow Waxa uu yahay Cudurka Baabasiirk...
Maxaad kala socota Cudurka Infekshanka Kaadida Wax...
Download:Dagso Antiverus Smadav_2014 Free ah Waa A...
barashada Adobe Audition sida loo duubo codka Cas...
Daawo Muxaadaro :Su'aalo iyo Jawaabo Sheikh Mustaf...
Daawo Muxaadaro ka hadleyso Muhiimada ay leedahay ...